Notanisain’ny Jly Florens ny fiampangana : nanomboka ny famotorana an’Andriamananoro Augustin | NewsMada
Notanisain’ny Jly Florens ny fiampangana : nanomboka ny famotorana an’Andriamananoro Augustin
”Fanaovana fihetsiketsehana tsy nahazoana alalana, fitarihana olona hidina an-dalambe, fakana basin’ny mpitandro filaminana, fandorana tanety…”. Izany, araka ny fitanisan’ny Jly Florens azy, ireo fiampangana an’Andriamananoro Augustin. Nanomboka, omaly any Miarinarivo, ny famotorana azy momba izany.
Roa andro aty aoriana. Notanisain’ny lehiben’ny CIRGN, ny Jly Rakotomahanina Florens, ireo antony hiampangana sy hanenjehana sy nisamborana ny minisitra teo aloha, Andriamananoro Augustin. « Hetsika tsy nahazoana alalana. Eo koa ny fanelingelennana ny fifamoivoizana miampy ny fandoroana ala sy ny nakana ny basin’ny mpitandro filaminana », hoy izy, omaly tetsy Ankadilalana. Nohitsiny fa efa hita ny toerana nisy ity olona akaiky ny filohan’ny Tetezamita ity, araka ny nambarany taorian’ny fandosirany tamin’ireny « Raharahan’i Soamahamanina » ireny. « Miditra amin’ny famotorana savaranonando izahay izao ary hatolotra ny fitsarana ny raharaha aorian’izany », hoy ihany izy.
Niaiky ny tenany fa tena mbola tao anatin’ny fahoriana sy ny fotoam-pandevenana tokoa Andriamananoro Augustin. Tsy maintsy mitohy sy atao anefa ny asa, araka ny fanamafisany. « Efa vita ny zavatra rehetra natao teny am-pandevenana ka nampidirina anaty fiara izy… », hoy ihany ny Jly Rakotomahanina Florens.
Araka ny lohanaranom-baovao, any Miarinarivo rahateo, nanomboka omaly hariva izany famotorana ity minisitra teo aloha ity izany. Mitarika ny famotorana ny manamboninahitra lefitra roa ary eo koa ny mpisolovava, ny Me Tahina raha mbola andrasana ny mpisolovava iray hafa, namany, mpiaro ny voarohirohy. Nialoha izany, nanontany ny eo anivon’ny tonia mpampanoa lalàna ny amin’ny tsy mbola nanombohan’ny famotorana ny mpisolovava… Natao ihany izany rehefa tokony ho tamin’ny 5 ora sy sasany hariva tany ho any.
Mitovy amin’ny fiampangana ny zanak’i Soamahamanina
Ho an’ny Me Olala, mazava ny azy fa tsy ara-dalàna ny fisamborana an’Andriamananoro Augustin. « Tokony hahalala amin’ny alalan’ny taratasy ny antony avy any amin’ny fitsarana ny olona samborina », hoy izy, omaly.
Hatreto aloha izany, mitovy amin’ny niampangana ireo zanak’i Soamahamanina ny an’ity olon-dRajoelina ity, raha miainga amin’io nambaran’ny Jly Rakotomahanina Florens io. Zanak’iny faritra iny rahateo ny tenany. Efa nahazo fahafahana anefa izy ireo rehefa niditra am-ponja vonjiamaika roa volana mahery. Mbola mihatra anefa ny sazy mihantona mitatao eo ambony lohan’izy dimy mianaka ireo.
Araka izany, andrasana ny ho tohin’ity raharaha ity sy ny mety hiakaran’izany aty amin’ny fitsarana etsy Anosy, anio.